I-Booshaka: Qonda, Bandakanyeka kwaye wandise kwi-Facebook
NgoLwesibini, Julayi 24, 2012 NgeCawa, ngoSeptemba 8, 2013 Douglas Karr
Ngelixa wonke umthengisi evuma ukuba ukuthengisa ngomlomo kuyindlela eqinisekileyo yokwandisa ukubonakala kunye nentengiso, uninzi luhlala luphulukene nendlela yokuyila iphulo lomlomo eliphumelelayo Facebook. Kulapho IBooshaka inganceda. I-Booshaka yenza lula igama losasazo lwentengiso kwintengiso yomlomo ngokunceda uphawu luqonde ngcono abalandeli babo kunye nokuseka ubudlelwane kunye nabalandeli babo kunye nabalandeli.
I-Booshaka yenza ingqiqo ngedatha ye-Facebook kwaye inikezela ngolwazi oluxabisekileyo onokulusebenzisa ekufumaneni umxholo kunye nemveliso, ukuqonda kwabathengi, uphando lweemarike, ukujolisa kwintengiso kunye nokwenza ngcono, ukuchonga amaqabane okwazisa kunye nokuxabisa, uhlalutyo lokhuphiswano, umlinganiso, umlinganiso kunye nokunye.
I-Booshaka ibonelela ngokuqonda kubalandeli abaphezulu kwi-maze yezimvo, ukuthanda kunye neminye imisebenzi. I-Booshaka iya ngaphaya kokubonakala komphezulu okanye ubukho bokubeka ixabiso kwigalelo lomqhubi ngokusekwe kumgangatho nakwimpembelelo. Umthengisi ufumana ukuqonda kwizibalo zabalandeli kunye nomsebenzi wakutshanje ngokunjalo. Ukuqonda okunje kuvumela umthengisi ukuba agxile kuhlobo olufanelekileyo lwabantu kwaye achonge ukuba yintoni enomtsalane kunqakrazo kunye nomsebenzi xa kuphuhliswa izicwangciso zosasazo kunye neendlela zokuzibandakanya.
Isampula yebhodi yabaphambili yabalandeli
UBooshaka uya ngaphaya konqakrazo oluphezulu. Ngelixa ezisisiseko Ibhodi yabaphambili ephezulu yabalandeli ibonelela ngeemveliso ngombono kwinto eyenzeka ngokwenyani, iindaba zokwenza ukondla kweendaba zincedise ekuphuculeni unxibelelwano kwaye ngaloo ndlela komeleze ukubandakanyeka kwabalandeli. Inqaku leMivuzo yeNtlalontle ivumela ukuseta iinkqubo zokuvuza abalandeli abaphezulu, ukwandisa intengiso yokunyaniseka kwindawo yemidiya yoluntu. Enye into ephambili, Pro Fans ephezulu iququzelela ukwanda kolwenziwo, kwaye inikezela ngezinye izinto ezinomdla-kubandakanya enye enceda ukuphelisa ugaxekile.
Isampulu yabalandeli bePro Pro yebhodi yabaphambili:
I-Booshaka ibonelela ngokubaluleka komxholo xa kunikwa amanqaku kunye nokuhlelwa kokudityaniswa kwabalandeli-okubonelela ngombono onzulu kwidatha. Ukufakwa kuyakhawuleza kwaye kulula, ngena kwi I-Booshaka Abalandeli abaphezulu, isithembiso esisisiseko, simahla. Nokuba inguqulelo yeFans Pro Pro yasimahla kwiintsuku ezisixhenxe zokuqala. Amaxabiso ongezelelweyo asekwe kwinani labalandeli onalo!
tags: booshakaFacebookAbalandeli be facebookfacebook uyayithandaIntengiso ye-Facebookamagqabantshintshi aphezuluAbalandeli abaphezuluukuthanda okuphezulu
Ngaba ukuKhangela okuhlawulelweyo kugqithisa uPhando lweOganic?
Ukukhawuleza kweGolide kwiiNgingqi eziPhezulu